Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo weerar afka ah ku qaaday Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug, HirShabelle iyo Koonfur Galbeed. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo weerar afka ah ku qaaday Madaxweynayaasha maamul...
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo weerar afka ah ku qaaday Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug, HirShabelle iyo Koonfur Galbeed.
Musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo weerar afka ah ku qaaday Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug, HirShabelle iyo sidoo kale Koonfur Galbeed.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ku eedeeyey saddexdan maamul in ay taageereen muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, waxa uuna sheegay in aysan la tashan dadka ay matalaan ayna jeebkooda ku wataan Go’aanka.
Qoraal uu soo dhigay baraha Bulshada ayaa sidaan u qornaa
“Waxaa is waydiin mudan dawlad goboleedyada qaarkood bulshadii rayadka iyo waxgaradkii ayey la tashadeen, ka dibna golayaashii Wasiirada iyo Baarlamaanka ayaa go’aan ku diiday muddo kororsiga . Laakiin dawlad Goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed yey la tashadeen markii ay go’aanka muddo kororsiga Farmaajo ku taageereen? bulsho rayad, waxgarad, Gole Wasiiro iyo Baarlamaan ma lahan miyaa? Mise dadkoodeey ka arkeen oo go’aanka iyagaa jeebka ku sita?,” ayuu qoraalkiisa ku yiri.
Sidoo kale musharrax madaxweyne Cabdiraxamaan Cabdishakuur Warsame ayaa si cad uga horyimid la kulanka madaxweyne Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo) oo dalab u diray qaar ka mid ah midowga musharraxiinta mucaaradka, balse ay ku gacan seereen.
“Farmaajo isagaa irdaha u soo xiray wadahadaladii doorashooyinka, ka dibna hoggaamiye kooxeed noqday. Ma jirto cid xiisa u qabta la kulankiisa,” ayuu sii raaciyey.
Previous articleSaraakiil Mareykanka ah oo dib ugu labtay Xerada Tababarada Garoonka Balli-doogle
Next article20 sano kadib duulaankii ciidamada reer galbeedka ku qadeen Afghanistaan
Maxay ugu dhigan tahay Doorsshadii Maanta ka dhscday Somaliland
Kaalinta Soomaaliya ay ka gashay tartanka orodka Japan
Waa kuma Cabdirisaaq Khaliif guddoomiyaha cusub ee wakiilada Somaliland?
Xafiiska Rooble oo ka socota kulan looga arinsanaayo Qilaafka Soomaliland ka socda
Madaxweyne ku xigeenka Kenya oo loo diiday in uu ka dhoofo garoonka Nairobi
Deeqda waxbarasho ee Hormuud Telecom oo sanadkii 3aad la bixinayo
Colaadda Tigray “ Muddo 3 maalmood ah ayaan lugeeynayay si aan...
Nolosha dadka ku nool gobolka Itoobiya ee dhagaxa iyo buuraleyda ah ee Tigreega ayaa waxaa ka jirta kala daadsanaan baahsan madaama ay la tacaalayaan...
guddoomiyihii hore ee Gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Mucalimu oo...
Saqib Khan oo ka mid ah xiddigaha Bollywood-ka ee soo jila...
Wasiir Ahmed Fiqi oo beeniyey war Idaacada Dowlada Waqtigeeda dhamaaday...
Waxaa lasoo saaray habraaca doorashada xubnaha Aqalka Sare ee baarlamaanka...
Hay’dda NISSA oo Noqotay Xubin ka Tirsan Sirdoonka Itobiya kadib markii...
Trump oo ku goodiyay inuu soo laaban doono
Madaxweyne Suudaanta Konfureed Salva Kiir oo kala diray baarlamaanka dalkaas
Mohamed Abdullahi Mohamed - August 3, 2021 0
Xafiiska Rooble oo ka socota kulan looga arinsanaayo Qilaafka Soomaliland ka...
Madaxweyne ku xigeenka Kenya oo loo diiday in uu ka dhoofo...